I-HEBEI RUBANG CARBON IMVELISO CO., LTD yanikezela ukuxhaswa okufanelekileyo kwe-baogang yensimbi emanyeneyo ngenxa yokusebenzisana okungcono kunye nomgangatho olungileyo we-graphite electrode ngo-matshi, ngo-2020. isiseko semizi mveliso kwi ...
Graphite electrode kwimarike uhlalutyo ingxelo
UDUBLIN, NOV. 30, 2020 i ”graphite electrode market uqikelelo ukuya 2027 - covid-19 ifuthe nohlalutyo lwehlabathi ngohlobo lwemveliso (amandla aphezulu, amandla aphezulu aphezulu, amandla aqhelekileyo); Ukusetyenziswa (iziko lombane learc, iziko leladi, abanye), kunye nejografi ”ingxelo yongezwa kuphando ...
I-HEBEI RUBANG CARBON IMVELISO YOKUGQIBELA., LTD iphuhlise itekhnoloji entsha yokulwa ne-antioxidant kunye nokufakwa kwi-oct.
Itekhnoloji yokwaleka kwe-antioxidant yokufaka i-graphite electrode, isetyenziswa kwii-electrode ze-graphite zombane wentsimbi yombane. yi-novolac epoxy, i-polyvinyl esemthethweni ye-acetal, i-phosphoric acid, i-silicon carbide, i-silicon-dioxide, iingoma ezifana ne-aluminium oxide, i-ferric oxide, i-boron nitrid ...